Nepal Deep | साफ फाइनल: भारतलाई हराउँदै नेपालको उपाधि उचाल्ने सपना होला त पुरा ?
साफ फाइनल: भारतलाई हराउँदै नेपालको उपाधि उचाल्ने सपना होला त पुरा ?
काठमाडौँ। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली शनिबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। फाइनल खेल माल्दिभ्सको मालेस्थित नेशनल स्टेडियममा राति पौने ९ बजे सुरु हुनेछ। नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको इतिहासमै फाइनल पुगेको यो पहिलो पल्ट हो।
अधिकांस समय यो प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणमै सीमित हुने गरेको छ ।
नेपाल जहिले पनि समूह चरणबाटै बाहिरिने गरेको थियो। यसपल्ट भने नेपालले त्यो परम्परालाई ताडेर पहिलो पल्ट उपाधिको भिडन्तमा ओर्लिन लागेको छ । भारतका लागि भने आजको खेल लगातार आठौं फाइनल हुनेछ। समग्रमा कीर्तिमान सात पल्टको विजेता भारतले फाइनल खेल्न लागेको यो १२ औं पल्ट हुनेछ। अहिलेसम्मका प्रतियोगिताका १३ संस्करणमध्ये सन् २००३ मा एकै पल्ट मात्र फाइनल पुग्न सकेको थिएन्।
दुवै टिमका प्रशिक्षक ‘डगआउट’ मा नहुने
यसपल्टको फाइनलको एउटा सबैभन्दा ठूलो विशेषता हुनेछ, दुवै टिमका प्रशिक्षक ‘डगआउट’ मा हुने छैनन्। त्यसो भनेको नेपालका अब्दुल्लाह अल्मुताइरी र भारतका इगोर स्टिमेक दुवैले टेक्निकल एरियामा रहेर आफ्ना खेलाडीलाई निर्देशन दिन पाउने छैनन, एक प्रकारले दुवै दर्शक हुनेछन्।
दुई पहेँलो कार्डका कारण अल्मुताइरी नेपालका लागि आफ्नो अन्तिम खेलमा यो अवसरबाट वञ्चित भएका हुन्। बंगलादेशविरुद्धको खेल पछि उनले फाइनल नेपालका लागि आफ्नो अन्तिम खेल हुने बताएका थिए। त्यसको एकदिनपछि उनलाई ‘डगआउट’ मा बस्न नपाउने पत्र दिइएको थियो।
भारतीय प्रशिक्षक स्टिमेकले माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा सिधै रातो कार्ड पाएका थिए, त्यसैले उनी पनि ‘डगआउट’ मा हुने छैनन्। नेपालका लागि प्रतियोगितामा अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्ने खेलाडीमध्ये एक रहेका अञ्जन विष्टले पनि फाइनल गुमाउने छन्। उनी पनि दुई पहेँलो कार्डको मारमा परेका हुन्।
जारी संस्करणको साफमा २ गोल गरेका अन्जनको अभाव फाइनल खेलमा पक्कै खड्कनेछ। फाइनल खेल गुमाउने भएपछि समर्थकबाट गाली पाएका अन्जनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भारतविरुद्धको खेलपछि दर्शकबाट आफूलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै आएको गालीप्रति दुख व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू सधैं नेपालका लागि शत प्रतिशत मिहिनेत गर्ने बताउँदै फाइनलमा आफू नभएपनि टोलीका अन्य खेलाडीले मिहिनेत गरेर टोलीलाई जिताउने बताए।
नेपाल यसअघि साफको सेमिफाइनलबाट अगाडी बड्न सकेको थिए। ५ पटक साफको सेमिफाइनलमा पुगेपनि नेपालले त्यो अगाडीको यात्रा तय गर्न सकेन। सन् २०१८ मा भएको साफको सेमिफाइनमा नेपाल माल्दिभ्ससँग ३–० ले पराजित हुँदै बाहिरिएको थियो। त्यसअघि सन् १९९९, १९९५, २०११ र २०१३ मा नेपाल सेमिफाइनलबाट अघि बढ्न सकेन।
यो संस्करणको साफमा लिग चरणका सुरुवाती दुई खेलमा लगातार जित निकाल्दै उपाधिमाथि दाबेदारी प्रस्तुत गरेको नेपाल तेस्रो खेलमा भारतसँग १–० ले स्तब्ध भएको थियो।
नेपालले पहिलो खेलमा माल्दिभ्सलाई १–० ले तथा दोस्रो खेलमा श्रीलंकालाई ३–२ ले हराएको थियो। लिग चरणको अन्तिम खेलमा बगंलादेशलाई एक–एक को बराबरीमा रोक्दै नेपाल पहिलो पटक साफको फाइनलमा पुगेको हो।
साफ च्याम्पियसिपमा नेपाल र भारतबीच हालसम्म ७ पटक भेट भएको छ। यसअघिका ६ भेटमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो। तर सन् २०१३ मा नेपालमा भएको साफमा नेपालले भारतलाई २–१ ले पाखा लगाएको थियो। त्यसयता नेपालले भारतलाई हराउन सकेको छैन।
साफ च्याम्पियसिपको यो संस्करणमा कमजोर सुरुवात गरेको भारतले अर्को बलियो टोली माल्दिभ्सलाई हराउँदै फाइनलमा नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। भारतले पहिलो खेलमा बगंलादेशसँग एक एक को बराबरी गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलंकासँग गोलरहित बराबरी गर्दै अंक बाँडेको थियो।
नेपालले लिग चरणमा भारतसँग भोगेको हारको बदला लिदै उपाधि जित्न चाहन्छ। लिग चरणमा भारतसँग रक्षात्मक खेलेको नेपालले भोलिको फाइनलमा आक्रमणमा पनि ध्यान दिनेछ।
खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली टोलीका सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले भने, ‘हामी पहिलोपटक साफको फाइनलमा पुगेका छौं, भोलिको खेल महत्वपूर्ण हुने र ठूलो खेल हो, हाम्रो लागि सहज हुनेछैन। तर हामी नतिजाका लागि खेल्नेछौँ।’
श्रेष्ठले यसअघि भारतविरुद्ध गरेको गल्तीलाई सुधार गर्दै खेल प्रस्तुत गर्ने बताए। यो पटक भारतविरुद्ध रक्षात्मक र आक्रामक रणनीति अपनाइनेछ।
नेपाली टोलीका कप्तान तथा गोलरक्षक किरण चेम्जोङले भारतविरुद्ध शनिबार हुने फाइनलमा गोर्खालीको शैलीमा खेल्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘भोलि हाम्रा लागि ठूलो दिन हो। भोलि हाम्रो सबै थोक होु, जितका लागि हामी सबैथोक दिन्छौँ।’
यता भारतीय फुटबल टिमका सहायक प्रशिक्षक शानमुगम वेंकटेशले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि नेपालविरुद्ध हुने खेल कठिन रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालले समूह चरणमा राम्रो नजितासहित खेलेको थियो। नेपालको टिम कन्फिडेन्स र मोटिभेटेड छ। फाइनल खेल हाम्रा लागि कठिन छ। तर फाइनल यात्रा तय गरेकोमा हामी खुसी छौँ। उपाधिका लागि हामी एक खेल पर छौँ। हाम्रा केटाहरु सकारात्मक ऊर्जासहित तयार छन्।’